Masjidka cusub ee Skärholmen | Somaliska
Xaafada Skärholmen ayaa laga dhisi doonaa Masjid cusub oo aad casri u ah. Masjidkaan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee 2 minaaradood leh oo Sweden laga dhiso. Masjidka ayaa la filayaa in lagu dhameeyo mudo 2 ilaa 3 sano ah kaasoo qaadi doona dadka gaaraya 1700 qof. "Waxa uu soo jiidan doonaa dad badan oo ku nool Iskandanefiya, ma jiro masjid kale oo labo minaaradood leh. waxa uu ilqabad u noqon donaa xarunta Skärholmen" ayuu yiri Syed Mansur oo ka tirsan Skärholmens islamiska kulturförening. Kala bar Masjidka ayaa lagu tukan doonaa halka inta kale loo isticmaali doono maqaaxiyo, jiim iyo goobo lagu kulmo. "Waa mashruuc is dhexgal, waa dhisme adeeg siin doona guud ahaan bulshada. Dhamaan muwaadiniinta waa u furanyahay, dhalinyarada iyo waayeelka" ayuu yiri Fikret Tümtürk oo ah agaasimaha Islamiska kulturföreningen. Masjidka ayaa laga dhisi doonaa irada hore ee goobta basaska laga raaco. Dhismaha ayaa sidoo kale yeelan doona dukaamo. Waxaa la filayaa in ay ku kacdo lacag gaareysa 50-100 milyan oo karoon, taasoo ay sheegeen maamulka in ay ka aruurin doonaan Muslimiinta Sweden iyo Yurub.
Xaafada Skärholmen ayaa laga dhisi doonaa Masjid cusub oo aad casri u ah. Masjidkaan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee 2 minaaradood leh oo Sweden laga dhiso. Masjidka ayaa la filayaa in lagu dhameeyo mudo 2 ilaa 3 sano ah kaasoo qaadi doona dadka gaaraya 1700 qof.
“Waxa uu soo jiidan doonaa dad badan oo ku nool Iskandanefiya, ma jiro masjid kale oo labo minaaradood leh. waxa uu ilqabad u noqon donaa xarunta Skärholmen” ayuu yiri Syed Mansur oo ka tirsan Skärholmens islamiska kulturförening.
Kala bar Masjidka ayaa lagu tukan doonaa halka inta kale loo isticmaali doono maqaaxiyo, jiim iyo goobo lagu kulmo.
“Waa mashruuc is dhexgal, waa dhisme adeeg siin doona guud ahaan bulshada. Dhamaan muwaadiniinta waa u furanyahay, dhalinyarada iyo waayeelka” ayuu yiri Fikret Tümtürk oo ah agaasimaha Islamiska kulturföreningen.
Masjidka ayaa laga dhisi doonaa irada hore ee goobta basaska laga raaco. Dhismaha ayaa sidoo kale yeelan doona dukaamo.
Waxaa la filayaa in ay ku kacdo lacag gaareysa 50-100 milyan oo karoon, taasoo ay sheegeen maamulka in ay ka aruurin doonaan Muslimiinta Sweden iyo Yurub.
Masha allah waye masjidkas dhaman waxan fila in dadka muslimka ah so jiidan donto xafadas somalidana wa kaqeyb dadkas islamaka ah wa mahadsanyihin inta qeyb kaqadatay dhismaha masjidka
mansha allah aad baan ugu faraxsanahay masjidkaan ,
waxaana jecelnahay hadaan nahay somalida ku dhaqan dalka swedan in aan gacan ka keysan doona insha allah
mansha alah wax lagu farxo waye muslimta haka qeebqadan
March 4, 2011 at 13:21
masha alaah aad baan uku farxay markaan arkay walalaha ka qayb hoow sha ku jiro waxa alaah uka baryaa inoow kuri uka dhiso janatul firdoosa sida aan uku farax nay alaah malinta qiyaamo ha harsiiyo carshika raxmaanka wabsaydka aadaan iidinka mahad celinaa sida qayrka nooku soo gudbinaysaan anakana waxaa aan owoodno waanka qayb qaada haynaa waad mahad santihiin alaah hangu guuleeyo